के लिंगको आकार सानो हुदा महिला खुसी हुन्छन त ? | Butwal Dainik
के लिंगको आकार सानो हुदा महिला खुसी हुन्छन त ?
हरेक मानिसको शरीरिको अङ्ग फरक फरक फरक हुन्छ । त्यसैले मानिसहरु एकआपसमा फरक देखिन्छन । ती अङ्गहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण अङ्ग हो लिङ्ग पनि । त्यसैले मान्छेपिच्छे लिङ्गको आकार पनि फरक हुन्छ । कस्को लिङ्ग ठूलो भन्ने कुराले मान्छे ठूलो वा साने भन्ने सवाल ठूलो होइन । जनावरको पुच्छर जस्तो लमो पुच्छरले धेरै झिङ्गा धपाउँने जस्तो होइन । लिङ्गको लम्बार्ई र चौडाइको कारणले कसैले पनि फुर्ती लगाउँनु हुन्न । किनकि प्रकिृतिले दिएको भन्दा कसैको पनि लमो हुन्न र प्रकृतिले आवश्यकता भन्दा छोटो कसैको पनि बनएको हुन्न ।
लमो होस वा छोटा,े लिङ्गले लिने यौन आनन्द सबैको उस्तै हुन्छ । बरु अपबादमा परेका सामान्य भन्दा ठूलो किसिमका र अति लामो लिङ्ग कसैको छ भने उसले यौनसम्पर्कको समयमा महिलालाई पीडा दिइरहेका हुनसक्दछ, पीडादायी यौनसम्पर्कले महिलालाई मटक्के यौन आनन्द आउँदैन । लिङ्गको काम भनेको आफुले यौन आनन्द लिने र आफ्नो यौन जोडी (श्रीमति) लाई पनि पर्याप्त सन्तुष्टि दिनु हो । अन्यथा श्रीमान श्रीमति बीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन । लिङ्ग लामो होस वा छोटो यौन सम्पर्कमा आत्मीयता भएन र पुरुषले यौनसम्पर्क बाहेकका अरु पनि यौन क्रियाकलाप (फोर प्ले) गरेन भने त्यसबाट महिलाले आनन्दको अनुुभूति गरेका हुँदैनन । महिलाले आनन्दको अनुभूति प्रकटव गरेको र नथरेको अवस्थामा पुरुषले पनि प्राप्त गर्ने आनन्दमा पनि फरक पर्दछ ।
यौन साथीलाई सन्तुष्टि दिन नसक्नु भन्नु केवल एक मानसिक धारणा वा भ्रममात्र हो । किनकी महिलाको योनीलाई तीन भागमा बाँड्दा अगाडीको एक भागमा मात्र यौन आनन्दको अनुभूति गराउँन मद्दत गर्ने वा चेतना दिने स्नायु रहेको हुन्छ, त्यो पनि एक किसिमको प्रोष्टेट ग्लाण्ड हो । जसमा छुँदा आनन्द आउँछ । त्यसमा लिङ्गको घर्षण हुँदा महिलाले आनन्द लिएका हुन्छन । त्यसै भागमा लिङ्गको घर्षण धेरै हुन्छ । त्यसैले छोटो भन्दा छोटो त्यो योनीको बाहिरी भागबाट भित्र २ इन्चसम्म मात्र हुन्छ । त्यसकारण लिङ्गको लम्बाई पनि २ इन्च भन्दा अलिकति मात्रै लामो भए यौन सनतुष्तिको लागि काफी हुन्छ । बाँकि लम्बाईको कुनै अर्थ छैन ।
अनि पुरुष्लाई आननद आउँनु भनेको पनि योनीमा लिङ्गको घर्षण गराउँनु हो । त्यसैले छोटा लिङ्ग हुनेहरुले पनि लामा लिङ्ग हुनेहरुले जत्तिकै आनन्द लिन सक्दछन् । मात्रै कुरा के हो भने दुबै जनालाई यौन आनन्द लिन लिङ्ग राम्रोसँग उत्तेजित हुनपर्दछ, आसनमा स्थान अनुसार परिवर्तन गरिरहनु पर्दछ र अनेको किसिमका फोर प्ले पनि गर्नुपर्दछ । अर्को कुरा, लिङ्गको लम्बाई योनीको लम्बाई भन्दा केहि लामो छ भनेपनि यौन सम्पर्कमा केही फरक पार्दैन । किनकी यौनसम्पर्क गर्दा योनीको लामो भाग योनीमार्ग हुँदै पाठेघरको मुखको पछाडि रहेको एउटा थैलो जस्तो ठाउँ जसलाई अंग्रजीमा म्यगनबिक भनिन्छ, त्यहाँ छिर्दछ । त्यो तन्कने किसिमको तन्तुले बनेको हुन्छ । त्यसैले सामान्यतया यौन सम्पर्कमा लिङ्गको लम्बाई छोटो वा लामो भएर केही असर गर्दैन ।
प्राय मानिसको लिङ्ग बाङ्गो नै हुन्छ । अधिंकशको चाहिं लिङ्ग उत्तेजित भएको बेलामा माथि तिर घुमाउरो पाराले बाङ्गो भएको हुन्छ भने कतिपयको चाहिं अलिअलि दायाँ वा बायाँ तिर फर्किएको हुन्छ । किशोरहरु शुरुशरुमा बाङ्गो लिङ्ग भएको कारण चिन्ता गरिरहेका हुन्छन भने समाजमा माथितिर बाङ्गीएको लिङ्ग हुनाले चाहिँ बढी यौन आनन्द लिनसक्छन भन्ने अर्को भ्रम पालेका हुन्छन । कतिपय पुरुषहरुले यौनसम्पर्क गर्दा चिप्लोपना धेरै भयो भनेर रुमालले बेलाबेलामा पुछ्ने गरेको बताउँछन, तर त्यसो गर्नु हुदैन किनकि खस्रोपनाले पीडादायी यौनसम्पर्क हुन्छ ।
कसरी सम्बन्ध राख्दा बच्चा बस्दैन जानिराखौ